यसकारण आउँदैन नेपालमा लगानी ! लगानी सम्मेलन कि ग्लानी सम्मेलन ? - Nepal Bahas Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०७५, शनिबार १२:५८
न्युन श्रम उत्पादकत्व, सूचकांकमा कमजोर उपस्थिति, भारतको मेक इन इण्डिया नीति र चीनको मेड इन चाइना नीति, कामदार निर्यात गर्ने नेपाल सरकारको नीतिका कारण नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिने सम्भावना अति न्युन छ
काठमाडौं । नेपाल बुझेका विज्ञहरु लगानी सम्मेलनलाई सप्ताह लगाउँदै दान उठाउने आम नेपाली प्रचलनसँग जोड्दै फेसबुक र टुईटरका वालहरु भर्न थालेका थिए । यो लगानी सम्मेलन पनि सप्ताहमा झैं दान घोषणा गर्ने तर पछि सुको नझार्ने दानवीरहरुको अवस्थासँग जोड्न थाल्दै तुलना गर्न थालिएको छ । विशेष गरी यो लगानी सम्मेलन एनआरएनहरुका लागि आफन्त भेट्ने मेलोमेसो, विदेशीहरुका लागि नेपालमा विदा मनाउने बहाना र सरकारका लागि के के न गरे भनेर सगरमाथा र रारामा मन्त्रीपरिषद बैठक राखेर गरिएको प्रचारबाजी झैं प्रचारप्रसार गर्ने अवसर भएको प्रसंग सामाजिक सञ्जालहरुमा यततत्र भेटिन्थे ।
लगानी सम्मेलन हो कि ग्लानी सम्मेलन हो भनेर फरक छुट्याउनु नै गाह्रो भईरहेको थियो । उद्योगमन्त्री बिनाको लगानी सम्मेलन दुलाहा बिनाको जन्ती जस्तै देखिएको गुनासो गर्दै थिए चियाखाने बेलामा यस पंक्तिकारसँग गफिएका एकजना भलादमी नेपाली उद्यमी । भारतबाट विद्युत आयात गरेर गरेर बालिएको बत्तीमुनी बसी भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने हावदारी गफपनि सम्मेलनमा प्रशस्त सुनियो । दुईसय अर्ब रुपैंयाको कृषिजन्ज वस्तुहरुको आयात गर्ने देशबाट कृषिजन्य वस्तुहरुको निर्यात गरी कृषिक्रान्ति गर्ने सोम शर्माहरु पनि सम्मेलनस्थलमा प्रशस्तै थिए ।
नभन्दै लगानी सम्मेलन यस्तै भयो । लगानी सम्मेलनमा न आयोजकहरुको अनुहारमा तेजिलोपना थियो, न त आगन्तुकका मनमा कुनै उत्साह नै थियो । विचरा उद्योगमन्त्री एक निरीह प्राणी झैं सम्मेलनको पुछारमा दर्शकदीर्घामा बसेर तमासा हेरिरहेका थिए । उद्योगमन्त्रीलाई गरिएको यो घोर अपमान कसैलाई पनि पचिरहेको थिएन । सहकर्मी पत्रकारहरु पास वितरणमा पक्षपात भयो भन्दै गुनासो गरिरहेका भेटिन्थे । वक्ताहरुका सुगारटाई भाषणले श्रोताहरु हाईहाई काढेर बसी रहेका थिए ।
वास्तवमा वातावरण उपयुक्त हुने हो भने लगानी सम्मेलन गरी नै रहनुपर्दैन । लगानीको वातावरण राम्रो छैन भने दियो–कलश पुजे झैं पुजे पनि कोही लगानी गर्न आउनेवाला छैनन् भन्दै थिए एकजना टाईसुटधारी उद्यमी । एकजना बुद्धिजीवी गुनासो गर्दै थिए इण्डेक्सहरुको । सबै इण्डेक्सले नेपालको नकारात्मक छवि नै प्रस्तुत गर्छन अनि कसरी आउँछ विदेशी लगानी भन्दै कट्किदै थिए उनी । उनीसँग गफिन मन थियो तर भिंडमा कता हराए कता । छुस्स दाह्री पालेका दार्शनिक जस्ता देखिने एकजना सहभागी भन्दै थिए, स्वदेशका मजुदर विदेश पठाएपछि नेपालमा आउने उद्योगमा काम गर्न चाहि कुन देशबाट आउने रहेछन् श्रमिकहरु ? कुन्नी भन्दै थिए ती दार्शनिक सहभागी ।
नेपाली श्रमिकको उत्पादकत्व नै खत्तम छ, बंगाली र इण्डियन मजुदर ल्यायो भने काम पनि बढी हुने र बन्द–हडतालको समस्या पनि नहुने भन्दै थिए एकजना उद्यमी जस्तो लाग्ने सहभागी । यस्तै गुनासा, उपदेश, आलोचना, व्यङ्य र आक्रोशहरु सम्मेलन अवधि भरी प्रशस्त सुन्न पाइयो । डायसमा सकारात्मक कुरा गर्ने मानिसहरु मात्रै थिए, फ्लोरमा थिए गुनासा नै गुनासाका गन्थनहरु ।
सारमा भन्नुपर्दा नेपालमा वैदेशिक लगानी नआउनुमा तलका चारवटा कारणहरु जिम्मेवार देखिन्छन् । यी चारवटा कारणहरु मुलुकमा रहिरहदाँ मुलुकमा लगानी सम्मेलन गर्नु भनेको सामाजिक सञ्जालहरुमा भनेझैं सप्ताह, विदा मनाउने मेसो, आफन्त भेटघाट गर्ने अवसर वाहेकहरु केही हुन सक्दैन ।
पहिलो कारण (न्युन श्रम उत्पादकत्व)
वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानी गर्नुअघि ध्यान दिने विषय श्रमिक उत्पादकत्व हो । सबैभन्दा नेपाली कामदारको उत्पादकत्व अति न्युन नेपाल, भारत र चीनका बीचमा अवस्थित छ । नेपाल आउने लगानी यी दुई देशको स्थितिप्रति निर्भर रहन्छ । भारत र चीनका कामदारको तुलनामा नेपाली श्रमिकको उत्पादकत्व अत्यन्त न्युन छ । उत्पादकत्व कमी हुनु भनेको उद्योगको लागत वृद्धि हुनु हो । यसकारण भारत र चीनको जस्तो श्रमिक उत्पादकत्व बढी भएका मुलुक हुँदाहुँदै कुनैपनि उद्यमी नेपालमा लगानी गर्न आउँदैन । तल दिएको ग्राफले नै भन्छ नेपालमा वैदेशिक लगानी आउँदैन ।
दोश्रो कारण ( सूचकांकमा कमजोर उपस्थिति)
सुचकांकमा कमजोर उपस्थिति :- विदेशी उद्यमीहरुले नेपालमा लगानी गर्नुअघि विभिन्न सूचकांकमा नेपालको स्थान र अंकलाई हेर्ने गर्दछन् । विभिन्न निकायहरुले प्रकाशन गर्ने सूचकांकहरुमा नेपालको स्थान पुछारतिर मात्र भेटिन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताहरुले लगानी गर्नुपूर्व सबैभन्दा बढी हेर्ने विश्व बैंकबाट प्रकाशित हुने इज अफ डुईङ विजिनेश प्रतिवेदन हो । सन् २०१९ मा प्रकाशित विश्व बैंकको प्रतिवदेनका अनुसार नेपाल ११० औं स्थानमा छ । नेपालभन्दा पछि विश्वका करिव ९० देशहरु मात्र छन् । जबकि भुटानको स्थान ८१ औं, भारतको स्थान ७७ औं र श्रीलंकाको स्थान १०० औं रहेको छ । हामै जस्तै भूपरिवेष्ठित मुलुक भुटान ८१ औं स्थानमा रहनु र हामी ११० स्थानमा रहनुले पनि विदेशीहरुले नेपालमा लगानीको वातावरण कस्तो होला भनेर सहजै अनुमान लगाउन सक्दछन् । दि हिमालयन टाइम्सका अनुसार सन् २०१७ मा १२२ औं स्थानमा रहेको नेपालको स्थान सन् २०१८ मा १२४ औं स्थानमा झरेको छ । यो इण्डेक्स बढी भएको मुलुकमा विदेशी उद्यमीहरुले लगानी गर्न रुचाउँदैन ।
तेश्रो कारण (भारतको मेक इन इण्डिया नीति र चीनको मेड इन चाईना नीति)
भारतले मेक इन इण्डिया नीति र चीनले मेड इन नीति चाईना नीति लिएका छन् । यी दुवै मुलुकमा कसरी विदेशी लगानी भित्र्याउने भनेर ठूलो प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । यी दुई देशमा रहेको अर्बभन्दा बढी जनसंख्याको बजारलाई छोडेर तीन करोड जनसंख्या भएको बजारमा कुनचाहिँ विदेशी उद्यमी लगानी गर्न आउँला र ?
चौथो कारण (कामदार निर्यात गर्ने नेपाल सरकारको नीति)
कामदार निर्यात गर्ने नेपाल सरकारको नीति नै रहेको छ । दक्ष कामदार जापानतिर, अर्धदक्ष कामदार द.कोरियातिर, अदक्ष कामदार जति खाडी र मलेशियातिर निर्यात गर्ने गरी नेपालका राज्यसंयन्त्रहरु परिचालित छन् । नेपालको आर्थिक कुटनीतिमा पनि श्रम निर्यात पहिलो प्राथमिकतामा पर्नें गरेको छ । नेपालमा भएका उद्योगहरु त मजदुर अभावमा बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने विदेशीहरुले खोल्ने उद्योगमा कहाँबाट श्रमिकहरु आपूर्ति गर्ने हो ? आश्चार्यको विषय भएको छ । श्रमिक निर्यात गरेर नेपालमा उद्योग खोल्न आउ भनी विदेशीलाई आव्हान गर्नु विश्वको आठौं आश्चार्य जस्तै भएको छ ।
## दक्ष कामदार